Iyakudunyiswa yizigidi zamadoda nabasetyhini, ziyamkelwa ngenxa ye talente yayo, nobuhle obukhwele. Inqwenela ngokwenene ... Nokuba umbhishophu waseRoma wayeke wachaza ukuba wayechasene nabantu, kodwa kuphela umntu omnye emhlabeni-uSophia Loren.
Umntwana ongekho mthethweni, uSofia Vilani Shikolonna (kwixesha elizayo, uSophia Loren owaziwayo emhlabeni) wazalwa ngoSeptemba 20, 1934 e-gray-gray, kodwa ehlala eRoma. Unina, uRommilda, wayengumdlali ophumelelayo. Emva kokuphumelela umncintiswano wamawele e-Greta Garbo. Le nhlanhla yaphelisa ukutshatyalaliswa kwakhe kwangoko kwinqanaba lezemidlalo. Ubomi kwindlunkulu ye-Italia ephuma ilanga libiza kakhulu kwaye alinganiseki. Unina ongatshatangayo uya kunye nentombi yakhe kwidolophu yokuloba e-Pozzuoli ekhangeleka ngokugqithisileyo, kude nomasipala. Wayengenakuvuyela ubuhle kunye netalente yintombi yakhe ethandekayo! Ukuze amncede avule ngokupheleleyo kwaye aqonde amaphupha akhe angagqibekanga, uRomilda uzinikela kunye nobomi bakhe yinjongo kuphela: unonwabo yentombi yakhe. Nge-15, uSofia uba ngumntu ongabikhoyo kumncintiswano wobuhle owenziwa eNaples. Ukongeza kwesihloko esithi "Indlovukazi", unikezwa ngokucacileyo isethi semibhobho yokulala kunye nethubhu, i-carpet yangaphandle, iibhilidi ezimbini kunye netikiti zesitimela eya eRoma - ubutyebi obukhulu kuwo wonke umntu okhulele ebuhlwempu obuthathakayo obuza e-Italy emva kweMfazwe Yehlabathi II. Njengoko umdlali wexesha elizayo wathi: "Awukwazi ukubiza loo mahle amnandi awazange akhale." Ngomnyaka we-1951, ibhinqa eliqhelekileyo lephondo lithatha inxaxheba kumncintiswano "Miss Italy" kwaye ifumana kwiJuriya yentshiseko umvuzo "Miss Chic", omiselwe ngokukhethekileyo kuye. Ngomncintiswano olandelayo wobuhle uSophie udibana nomfazi wakhe wekamva, umvelisi wefilimu uCarlo Ponti. Uba ngumvelisi wakhe, uthatha inxaxheba ekwakhiweni komsebenzi wakhe: unxusa ootitshala bezakhono zobumbele, ulungise iimvavanyo zesikrini. Ekuqaleni, uPonty akazange asebenzise kakubi kwiifilimu zokudlula kuphela u-sexuality of his choice. Akufanele akhanyise ngetalente yelitha, kwanele ukuba abe nombonakalo obalaseleyo kwifreyimu kwimigca engaphandle okanye ehamba. Umkhiqizi ongenamsebenzi wagxininisa ukuba umdlali we-actress utshintshe igama lakhe kuLauren.
Impumelelo ekulindelwe ixesha elide
Iingxelo zokuqala zokuvunywa ezihlaziyiweyo zefilimu, uSofia wathola inxaxheba yecala lokuthengisa umthengisi waseNeapolitan kwifilimu uVitorio de Sica "Igolide leNaples" (1954). "Ndikholelwe, andizange ndifane nomfanekiso okanye into yokuyila," u-actress wathi, "ngenxa yokuba ndakhula phakathi kwabantu abaqhelekileyo kwaye ndiyazi kakuhle abantu babo." Kwakuye kwiindidi ezininzi ze-Sica ukuba i-talente kaLauren eyayiqhelekileyo yenziwe ngekristali. Emva kokubonakala kwiphephancwadi yakhe ethi "Chochara" (1961), wawina umvuzo weCannes Festival Festival nakumazwe aphesheya "Oscar" yendima ebhetele yowesifazane. Ngendlela, eli lixesha lokuqala kwimbali xa i-award yaseMelika eyaziwayo kakhulu kule nqanaba yanikezelwa kumdlali wesenzo sangaphandle. Iminyaka eyi-15 ezayo, uSophia Loren udutshulwa kwifilimu zase-Hollywood zase-Hollywood. Ukudubula okungapheliyo, iindiza eziqhelekileyo, iziganeko zentlalo zityhila iindizi ezibalulekileyo ze-actress. Njengoko uyazi, yonke into kamva okanye kamva kufuneka uyihlawule: USophie akakwazi ukukhulelwa. Kwiminyaka emininzi uLauren waphathwe ngenxa yokungabikho. Ingaba amayeza ancedwa, okanye uThixo wamva ukuncenga kwakhe - ngo-1968, uSophie Carlo uPonty Jr wazalwa, kwaye emva kweminyaka emine-unyana kaEduardo.
Ukususela ekupheleni kwee-1970, uye wayesebenzisa ifilimu encinane, egxininise intsapho kunye nentlalo-ntle yabathandekayo. "Khangela umthombo wengqondo yolutsha," ucebise umdlali we-actress, kwaye ngoko ngokwenene uya kuba yinto enhle kwaye uyinqobe! "UCauren ohlakaniphileyo unxibelelwano olufanelekileyo kwiilwimi ezimbini zasemzini: isiNgesi kunye nesiFrentshi, kwaye ama-aphorisms ayo aphiko. Uqinisekile ukuba umhlobiso oyintloko walo nawuphi na umfazi ukuzola kunye nokulinganisa ubomi. Yonke le nto ingabizwa ngokuba negama elilodwa lokukhulisa.
I-Talent Lauren ininzi. Ngowe-1979 ukuya ku-1980 wanyathelisa incwadi yokuzimela. Kwiminyaka embalwa kamva waqamba umbane. Emva koko wabhala waza wanyathelisa abathengi abaninzi, ngokukodwa umsebenzi ophawulekayo "Owesifazane noBumnandi". Ukususela ngo-1984, umdlali we-actress akafaneki ukugubungela abalandeli bakhe ngeendima ezintsha kwi-cinema, kodwa inzala kwimisebenzi yakhe ayinamandla. "Ndiyayithanda ubudala bam!" - akayi kunzima ukuphindaphinda umdlali. Ngaba ucinga ukuba oku kudlalwa ngobomi obulumko boMqondiso? Akunjalo! Ngonyaka ka-2007, uSophia Loren, owayeneminyaka engama-72 ubudala, wayebonakala engabonakali kwikhalenda elidumileyo elithi "Pirelli". Kwaye akukho mntu uphendule ulwimi lwakhe ukumbiza ngokuba ngumfazi omdala. Hayi, hayi kwaye akukho! Kusengumfana onyantyazana onyantyazana ovela kwidolophu encinane yaseNtaliyane yasePozzuoli.
Abaninzi abantu bayazi ukuba uSophie ufumene ukuhamba kwakhe okwehlukile kwesondo kwi-Sic movie "Umtshato waseNtaliyane" (1964) umbulelo kumyeni wakhe. UPonti wanyanzelisa uSophie ukuba ahambe phakathi kweekhabhinethi ezilungiswe ngokulandelelana kwaye zivule iingcango ezivulekileyo ezinqeni zakhe kude kube yilapho efunde ukuzithula ngokucotha. "Ngokuqhelekileyo iingxaki zokunyamezela kunye nokuziphatha kakubi zihambelana nenyaniso yokuba le ntokazi ayiqinisekanga ngokwayo," umdlali wezandla wathi ngaphezu kweyodwa. "Nobuhle, njengoko ndiyakholwayo, kunzima. Oku kubangele abantu. "
Imfihlelo eyona nto yokuheha, umdlali wendlela ubiza impilo yokuphila. "Kakade, ufuna ukutya okunomsoco, usebenzise umzimba, ndizisola nje into enye: Ndizange ndifune ukutshaya kwiminyaka engama-50. Sifanele senze oku kwangaphambili. " Unako ukufumana ubuthakathaka obuthandayo. U-Sophie uthi, kungekhona ngaphandle kwengqumbo: "Ubuhle kunye nempilo ndinetyala le-pasta ukusuka kwingqolowa yenkomo kunye nokuhlamba ngeoli yeoli. Kodwa kubaluleke kakhulu - ukulala ubuncinane iiyure ezingama-7-8. "
UKurt Vonnegut, i-biography
Konstantin Ernst: inyaniso enomdla ebomini
Impembelelo yengozi ye-chips emzimbeni
I-Psychology yobudlelwane bomama kunye nendodana yakhe
Iminqweno enhle ye-Call Last-2017 kwindinyana kunye neprose-kubazali, ootitshala, abalingani, abafunda nabo